.: အချစ်နဲ့ အချိန်
တချိန်းတုန်းက ခံစားမှုပေါင်းစုံနေတဲ့ ကျွန်းလေးတကျွန်းရှိခဲ့တယ်...။အဲဒီကွန်းလေးမှာ ပျော်ရွင်မှု၊ ၀မ်းနည်းမှု၊ အသိပညာ နဲ့ ခံစားမှုပေါင်းစုံဟာနေထိုင်ကြတယ်၊ အချစ်လဲပါတာပေါ့။တနေ့ မှာ အဲဒီကွန်းစွယ်လေးမှာ ရေးကြီးမယ်လို့ သတင်းကြားတာနဲ့ အချစ်ကလွဲ ပြီးကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာ လှေတွေတည်ဆောက်ပြီး အဲဒီကျွန်းစုလေးကနေစတင်ထွက်ခွါသွားကြတယ်။
အချစ် တယောက်တည်းသာအဒီကျွန်းစွယ်လေးမှာနေခဲ့တယ်။ သူဟာ အဲဒီကျွန်းဆွယ်လေးမှာ သူနေနိုင်သလောက်အချိန်အထိနေမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နေ့ ရက်တွေကျော်လွန်ပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်းဆွယ်လေး ဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နစ်မြုတ်စပြုလာတော့ အချစ် ဟာ တစုံတယောက်ကို အကူအညီတောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ချမ်းသာ ဟာသူ့ ရှေ့ ကနေ လှေလေးနဲ့ ဖြတ်သွားတော့ အချစ်က လှမ်းအကူအညီတောင်းလိုက်တယ် ..။
အချစ်.....ချမ်းသာ. မင်းနဲ့ အတူငါ့ကို ခေါ်သွားလို့ ရလား
ချမ်းသာ.....မရဘူး၊ ငါနဲ့ အတူမင်းကိုခေါ်သွားလို့ မရဘူး ငါ့လှေပေါ်မှာ ရွှေတွေငွေတွေအများကြီးနဲ့ ပြည့်နေတယ်..။ မင်းအတွက်နေရာမရှိဘူး။
ဒါနဲ့ ပဲအချစ်ဟာ အနီးအနားက လှပတအိုးလေးနဲ့ ဖြတ်သွားတဲ့ ထယ်ဝါခြင်းကို အကူအညီတောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
အချစ်...ထယ်ဝါခြင်း ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ကို ကူညီပါ..။ထယ်ဝါခြင်း...ငါမင်းကို ကူညီလို့ မရဘူး ၊ မင်းကိုယ်တခုလုံးဟာစိုရွှဲနေတာကြောင်းငါ့လှေလေးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်။
၀မ်းနည်းခြင်းကလည်း အနားကို ရောက်လာတော့
အချစ်....၀မ်းနည်းမှု မင်းနဲ့ အတူငါ့ကို သွားခွင့်ပြုပါ
၀မ်းနည်းခြင်း...ငါတယောက်တည်းပဲ သွားချင်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး
ပျော်ရွှင်ခြင်းရောက်လာပြန်တယ်...ထို့ အတူပါပဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာလည်း သူခေါ်တာကိုတောင်မကြားပါဘူး..
လာခဲ့ငါနဲ့ အတူမင်းကိုခေါ်သွားမယ်..လို့ ရုတ်တရက် ကြားလိုက်ရပါတယ်။ သူ့ ကိုခေါ်တဲ့သူကတော့ ရင့်ကျက်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်...။ အချစ်ဟာ အလွန်တရာမှပျော်ရွင်သွားပြီး သူတို့ ဘယ်သွားနေလဲဆိုတာကိုတောင်မေးဖို့ မေးနေခဲ့တယ်။ သူတို့ ဟာခြောက်သွေ့ တဲ့ကျွန်းတခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာ လမ်းခွဲလိုက်ကြတယ်။
အချစ်ကနေ နောက်ထပ် ဗဟုသုတ (နောက်ထပ် ရင့်ကျက်သူတဦး)ကိုမေးလိုက်ပါတယ် ။
အချစ်...အချိန်? သူကငါ့ကို ဘာလို့ ကူညီတာလဲ?
''ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အချစ်ဟာ ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကို အချိန်ကသာနားလည်လို့ ပါပဲ။ ''
(Love and Time ပုံပြင်ကို စီလျှော်အောင်ဘာသာပြန်သည်)
Ps:လာရောက်လည်ပါတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ၊ ညီအကိုမောင်နှမ တွေးအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်...။ ဘာသာတခုမှတခုပြန်ဆိုခြင်းဟာ ကျမအတွက်တော့ သိပ်ပြီးလွယ်ကူလှတဲ့ကိစ မဟုတ်သောကြောင့် အမှားများရှိခဲ့လျှင်လည်း သီးခံပြီးဖတ်ပေးစေချင်ပါတယ် ...။
Post By ငှက်ငယ်လေး at 8:45 PM
:) read lohayan kg tal......... khan sar pi read twar tal. :)
ဒီပုံပြင်လေးက ဖတ်ဖူးတာ ကြာပေမယ့်
အခု ထပ်ဖတ်လိုက်ရတော့ ပြေပြစ်တဲ့ အရေးအသားရယ်
ရှင်းလင်းတဲ့ စကားလုံးတွေ ရယ်ကြောင့်
ပိုပြီး နားလည်ခံစားလိုက်ရပါတယ် ..
အခုလို မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ခင်ဗျ ..